बमजनको बेडमा भेटियो यस्तो चिज (भिडियो र बमजनको विस्तृत सहित) - Muldhar Post
बमजनको बेडमा भेटियो यस्तो चिज (भिडियो र बमजनको विस्तृत सहित)
मूलधार पोष्ट २०७५, २६ पुष बिहीबार 323 पटक हेरिएको
‘आश्रमबाट तीन सय मिटर पर नौ प्याकेट नुनको खोल भेटियो। त्यसमा हड्डी पाएको छैन’ अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरी नायव उपरीक्षक विमलराज कँडेलले भने, ‘शव अन्यत्रै लगेर जलाइएको हुनसक्छ।’ सञ्चलालका छोरा महेन्द्रले बाबु खोजीपाऊँ भनी बिहीबार जिल्ला प्रहरीमा जाहेरी दिएका थिए। लगत्तै प्रहरीले जिल्ला अदालतबाट अनुमति लिएको थियो।
त्यसपछि शुक्रबार नै प्रहरी टोलीले इन्द्रावती गाउँपालिकास्थित बाँडेगाउँको टोड्के वनस्थित बम्जनको ८० रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको आश्रममा छापा मारेको थियो। सञ्चलालकाछोराले आफ्नो बुवालाई कुटेर मारेको आरोप लगाएका छन्। वाइबाको खोजीका लागि साता दिन अघिदेखि विशेष अनुसन्धान टोली खटाएको प्रहरीले जनाएको छ। बमजनको आश्रममा के देखियो ? जस्ताको त्यस्तै, तथ्य बाहिरएपछी प्रहरी पनि चकित भिडियो:
मध्य तराईको बाराको एकान्त बनमा एक ठूलो पीपलको बोट मुनि ध्यान गरिरहेका कलिला रामबहादुर बमजनले सन् २००५ मा एकाएक चर्चा बटुले। १६ वर्षीय बमजनले बारास्थित एक जङ्गलमा ध्यान गर्न सुरु गरेका थिए। सेतो रङको पातलो कपडा लगाएका उनको शरीर स्थिर थियो। आँखा बन्द थियो। र उनी ध्यानमा लीन थिए। त्यसअघि कसैले नचिन्ने किशोर एकाएक विश्वप्रसिद्ध बन्न पुगे।
सुरुमा आसपासका स्थानीयबासी उनलाई हेर्न बाराको बनमा गए। त्यसपछि अन्य देशका तीर्थयात्री पनि आउन थाले। उनी बनमा ध्यानमा बसेको एउटा तस्बिर सोही वर्ष ‘भाइरल’हुन गयो। उक्त तस्बिरले नेपालमा मात्र नभएर विश्वका प्रमुख सञ्चारगृहको समेत ध्यान खिच्न सफल भयो। उनै रामबहादुर बमजन करिब १३ वर्षपछि फेरि एक पटक चर्चाको केन्द्रमा छन्। उनी चर्चामा आउनुको कारण धेरैलाई प्रिय लागिरहेको छैन। उनको आश्रमबाट केही व्यक्ति बेपत्ता भएका विवरणहरू सेतोपाटी डिजिटल पत्रिकामा आएको थियो।
बमजन आबद्ध संस्था, बोधी श्रवण धर्मसंघले एक विज्ञप्ति निकाल्दै, सञ्चारमाध्यममा उनीबारे आएका समाचार अस्विकार गरेको छ। त्यो विज्ञप्तिले ती समाचार “आधारहीन र सडेगलेका” भएको र तीनलाई संस्थाले “खारेज” गरिदिएको जनाएको छ। उनीविरुद्ध उजुरीसमेत परेको बताइएको छ। तर उनी कहाँ छन्? त्यो जानकारी प्रहरी प्रशासनलाई समेत छैन।
“उनी गर्भमा हुँदा उनकी आमालाई माछा मासु खान मन लागेको थिएन र पछि बमजनले पनि मासु खाएनन्। उनी सानो उमेरदेखि नै लामो समयसम्म घर बाहिर जाने गर्दथे।” उनले कलिलो उमेरमै ध्यानमा मग्न भएर सबैलाई आश्चर्यचकित बनाएको बताइन्छ।
सन् २००५ मा बीबीसीसँगको कुराकानीमा उनका परिवार, साथीभाइ र अनुयायीले बमजन ६ महिनासम्म पानी समेत नपिएर ध्यानमा लीन भइसकेको र बुद्धत्व प्राप्त नहुँदा सम्म उनी ध्यानमै रहने बताएका थिए। उक्त विवरणका अनुसार गौतम बुद्धको आमाको नाम मायादेवीसँग मिल्न गएको बमजनको आमाको नामका कारण पनि स्थानीयहरूले उनले गरेको तपस्यालाई सिद्धार्थ गौतम बुद्धसँग जोडेर हेरेका थिए।
त्यसो त तपस्या सुरु गर्नु अघि नै उनले आफ्नो परिवारका अन्य सदस्यलाई पशुबली नदिन, माछा मासु र रक्सी सेवन नगर्न आग्रह गर्ने गरेको पारिवारिक श्रोतहरूले बताउने गरेका छन्। तपस्या गर्ने क्रममा उनी बीचबीचमा हराउने र केही समयपछि फेला पर्ने क्रम चलिनै रह्यो। १६ वर्षको उमेरमा तपस्या गर्न सुरु गरेका बमजन पहिलो पटक १० महिना लामो ध्यान बसेकै बेला अचानक गायब भएका थिए।
तपस्याप्रति उनको लगाव र बुद्धसँगको तुलनाका कारण उनी ध्यान बसेको स्थान आसपास उनलाई हेर्न मात्र आउने आगन्तुक र भक्तजनहरूको भिड लाग्ने गरेको जानकारहरू बताउँछन्। अनुयायीहरूले बिस्तारै उक्त क्षेत्रलाई लुङ्ता छोर्तेन जस्ता धार्मिक ध्वजा-पताकाले सुसज्जित गरेपछि उक्त स्थान बिस्तारै धार्मिक स्थलमा परिणत हुँदै गयो। नेपालमा मात्र नभएर विश्वव्यापी रूपमै चर्चा बटुल्न सफल उनको कर्मले यति चर्चा पायो कि उनले निकै कम समयमा सामान्य बुद्धभक्तबाट चर्चित तपस्वीको भेष धारण गरे।
बारा बाहेक सिन्धुपाल्चोक, लमजुङ र सर्लाही जिल्लामा समेत उनको आश्रम रहेको प्रहरी अधिकारीहरूले बीबीसीलाई बताए। बीबीसीले सम्पर्क गरेको दुई जना प्रहरी अधिकारीका अनुसार उनी हालका दिनमा कहाँ बसिरहेका छन् भन्ने कुराको खोजी प्रहरीले समेत गरिरहेको छ। तर आरोप बमजनप्रति भन्दा पनि आश्रम गएका आफन्तहरूको खोजीसँग सम्बन्धित भएकाले तत्काल बमजनलाई नै कारबाही गर्ने भन्दा पनि उनका आश्रम लगायत अन्य स्थानमा हराइरहेकाहरूको खोजी गर्नेतर्फ आफ्नो कारबाही केन्द्रित हुने प्रहरी अधिकारीहरूले जानकारी दिए।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराका एसपी सानुराम भट्टराईका अनुसार बमजन हालका दिनहरूमा बारामा बस्न छोडेका छन्। उनले भने, “वहाँ कहाँ हुनुहुन्छ भन्ने थाहा नभए पनि हामीले हेटौँडामा परेको उजुरीको सम्बन्धमा भने खानतलासी गर्न सुरु गरिसकेका छौँ,” उनले भने।
बमजनले सञ्चालन गरेको आश्रमबाट अनुयायीहरू बेपत्ता भएको विवरण सार्वजनिक भएसँगै बमजन माथि विभिन्न किसिमका आरोप लाग्न सुरु भएको छ। हेटौँडास्थित प्रहरी कार्यालयमा फुलमाया रूम्बा र कर्म वाइबालगायतका अनुयायी बमजनको आश्रमबाटै हराएको भनेर उजुरी परेपछि उनी विरुद्धका आरोपहरू थप पेचिलो बन्दै गएका छन्।
”हामीकहाँ कुनै बेला आश्रममा बस्ने गरेका दुई जना अनुयायी खोजी गरिदिनुपर्‍यो भन्दै उजुरी परेसँगै हराइरहेका भनिएकाहरूको खोजतलास तीव्र बनाएका छौँ,” जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डिएसपी यज्ञप्रसाद भट्टराईले बीबीसीलाई जानकारी दिए। बमजनको आश्रम भएको सबै स्थानमा हराइरहेकाहरूको फोटोसहितको प्राप्त अन्य विवरण सम्बन्धित जिल्लाका प्रहरी प्रशासनलाई पठाई सकिएको उनले जानकारी दिए।
प्रहरी समक्ष उजुरी दिनेमा फुलमाया रूम्बाका भाइ विजय रूम्बा र सञ्चलाल वाइबा का छोरा महेन्द्र वाइबा रहेको भट्टराईले पुष्टि गरे। त्यस्तै बाराका हस्तबहादुर आले मगर र नुवाकोटकी गंगामाया तामाङले पनि हराई रहेका आफन्तको खोजी गरिदिन सम्बन्धित जिल्लाका प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिएको विवरणहरू सार्वजनिक भएको छ।
यसै वर्षको भदौ महिनामा ललितपुरस्थित एक सामुदायिक रेडियो कार्यालयमा १८ वर्षीय गंगामाया तामाङले पत्रकार सम्मेलन गर्दै बमजनले आफूमाथि बलात्कार गरेको आरोप लगाएकी थिइन्। त्यसपछि बमजनविरुद्ध थप आरोपहरू लागेका र प्रहरीमा उजुरीहरू परेका विवरण बाहिर आइरहेका छन्। बिबिसी नेपाली सेवाबाट